Hupenyu hwakanyanya. Zvinotora kusuwa kuti uzive mufaro chii, ruzha kukoshesa kunyarara, uye kusavapo kwekukoshesa kuvapo. - Anotungamira - Quotes Pedia
Hupenyu hwakawandisa. Zvinotora kusuwa kuziva kuti mufaro chii, ruzha rwekunzwisisa kunyarara, uye kusavapo kukoshesa kuvepo. - Asingazivikanwe
Hupenyu hunoshamisa uye ichokwadi. Isu hatizive kukosha kwezvimwe zvinhu kusvikira uye kunze kwekunge tarasikirwa nazvo. Ehe, uchitarisa-tarisa, unogona kusaziva izvi izvozvi, asi pasi pemutsara, une chokwadi chekutora iyo pfungwa chaiyo yemashoko aya.
Isu hatikoshese chero chinhu kusvika panguva yatinacho. Isu tinotora izvo zvinhu sezvisina basa uye hatinetseki kuzvitarisa uye nekukoshesa kukosha kwazvo. Aya ndiwo maitiro edu epfungwa anowanzo shanda!
Isu tinotanga kutarisisa kune izvo zvinhu chete kana isu tazvirasa. Izvo zvinotaurwa nenzira kwayo kuti zvinotora kusuwa kuziva kuti chii chinonzi mufaro!
Iwe hauzomboziva nezve mufaro, uye kana kutomboziva kuti uri kufara kusvika uye kunze kwekunge waona nhamo nekusuwa muhupenyu hwako.
Iwe unofanirwa kuve nemazuva akashata kuitira kuti uone kuti wanga uchirarama hupenyu hunofadza uye hwakanaka nguva yese iyi.
Nekudaro, iwe unozogona kukoshesa kukosha kwekunyarara chete kana iwe uchinzwa yakawanda ruzha yakakukomberedza.
Mune imwe nzira, inogona kunyorwa sezvo iwe waisazombogona kunzwisisa kuti kunyarara uye kudzikama kwakakomberedza kungaite kuti unzwe sei kusvika uye kunze kwekunge wavhiringidzika wakakomberedza zvakakupoteredza.
Zvakare, iwe unozogona kunzwisisa kukosha kwekuvapo kwemumwe munhu akakukomberedza chete kana munhu asisipo.
Iko chete kusavapo kwemunhu kunozoita kuti iwe uzive kuve kwake. Kana mumwe munhu achigara aripo akakukomberedza, tinowanzo mutora semunhu asina basa.
Semuenzaniso, isu tine amai vedu vanogara varipo kwatiri, vachiita mabasa ese epamba, uye nekudaro, hatizive kuvapo kwavo kusvika uye kunze kwekunge vaenda kune imwe nzvimbo.
Nenzira imwecheteyo, isu hatikoshese kukosha kwechimwe chinhu kusvikira nguva yatinacho. Tinogona chete kudzidza kukosha kana munhu iyeye asisipo.
Naizvozvo, iwe unofanirwa kugara uine chokwadi chekuti iwe dzidza kukoshesa zvinhu kudzamara varipo muhupenyu hwako, nekuti hazvingabatsiri zvachose kukoshesa ivo kana vaenda.
Kuchema Mukunyarara Quotes
Mufaro Uye Kusuruvara Quotes
Quotes About Kugara Mukunyarara
Sad Chinyararire Quotes
Kusuruvara Kunotora Mifananidzo
Kunyarara Kunotora Mifananidzo
Ungwaru Quotes Nezve Hupenyu
Patinoisa matambudziko edu mumawoko aMwari, vanoisa runyararo rwavo mumoyo yedu. - Asingazivikanwe
Kana taisa matambudziko edu mumaoko aMwari, anozoisa runyararo mu…
Tarisa chimwe chinhu chakanaka nezve ino nguva. Kunyangwe iwe uchifanira kutarisa zvishoma kuomarara kupfuura zvakajairwa, ichiripo. - Asingazivikanwe
Chaizvoizvo, kuva netariro sarudzo, uye zviri kwatiri kuti tinoona matambudziko edu se…
Nguva yakanakisa yekutanga nyowani ikozvino. - Asingazivikanwe
Nguva yakanakisa yekutanga nyowani ikozvino. - Asingazivikanwe Akabatana Akabatana:
Rimwe zuva iwe unozozvitenda wega nekusazombokanda mapfumo pasi. - Asingazivikanwe
Rimwe zuva iwe unozozvitenda wega nekusazombokanda mapfumo pasi. - Asingazivikanwe Akabatana Akabatana:
Vanhu vanogara vachiona shanduko mumaonero ako kwavari asi wotadza kucherechedza hunhu hwavo hwakaita kuti uchinje. - Asingazivikanwe
Vanhu vanogara vachiona shanduko mumaonero ako kwavari asi wotadza kuona kuti ndiwo maitiro avo…